Toerana Loholona miisa folo amin’ireo roa ambin’ny folo nofidian’ireo mpifidy vaventy, no azon’ny IRMAR (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina), nahazo toerana roa kosa ny MMM (Malagasy Miara Miainga). Nivoitra ireo nandritra ny tatitra ny vokatra vonjimaika tamin’ny fifidianana Loholon’i Madagasikara ny 11 desambra 2020, nataon’ny CENI ny alarobia 23 desambra 2020. Nanao pao-droa ny IRMAR tamin’ny faritany efatra, ankoatra an’i Toamasina sy Antananarivo, izay nahazoan’ny MMM toerana iray avy. Tamin’ireo mpifidy vaventy miisa 12 465 voasoratra ao anaty lisi-pifidianana, 11 642 no nandray anjara tamin’ny fifidianana. Tao amin’ny Distrikan’i Miandrivazo sy i Morombe no voalaza fa nisy fandikan-dalàna tamin’ny fifidianana, ka nisarihan’ny CENI ny sain’ny Fitsarana mahefa.
Nihaona voalohany tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy, ireo mpikambana ao amin’ny Vaomiera Itambarana miandraikitra ny fanaovana ny Karatra ho an’ny Mpanao Gazety matihanina, ny Talata 22 Desambra 2020. Natomboka tamin’ny fifidianana izay ho filoha mpanatanteraky ny vaomiera ny fivoriana, ka i Jean Aimé Rambeloson, avy amin’ny Fikambanan’ny Mpanao Gazety Zokiolona (CJD) no voafidy tamin’izany.
Nanokana fotoana hisaorana ireo mpiasa handeha hisotro ronono amin’ity taona 2020 ity ny Antenimieram-pirenena. Notanterahina teny Tsimbazaza, ny 21 desambra 2020, izany. Naneho ny fankasitrahana ny asa vita rehetra ny Filoha Lefitra Razafitsiandraofa Jean Brunelle sy ny Sekretera Jeneraly Randriamahafanjary Calvin, ary nitsodrano azy ireo amin’izay adidy hafa mbola miandry. Ny nisolo tena ireo handeha hisotro ronono kosa dia nanentana ireo mbola am-perin’asa hazoto hanatanteraka sy hanaja ny asa. Nisy ny fanolorana takelaka mari-pankasitrahana sy fanomezana ho an’ireo 15 mianadahy mianaka ho mari-pahatsiarovana.
Notanterahana teto amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe, ny 19 desambra 2020, ny Filankevitry ny governemanta ho tohin’ny fivoriana fanao isan-kerinandro ao amin’ny Lapan’i Mahazoarivo, ka nandinihana ireo raharaham-pirenena tsy afa-miandry, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian. Nambaran’ny Praiminisitra fa na dia amin’izao ankatoky ny faran’ny taona izao aza dia mbola maro ireo fanavaozana maro isan-karazany tsy maintsy atao eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary ilàna fandinihana sy famakafakana lalina ary fotoana ka izay no anton’izao fivoriana eto amin’ny Akademia Miaramila izao.
Notsaraina tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina androany ny raharaha nitorian’ny senatera Harisson Benesy an’i Mahery Lanto Manandafy, taorian’ny namoahan’ity farany vaovao diso tamin’ny facebook nilaza fahafatesana fianakaviana akaiky ny mpitory. Samy tsy nisy tonga niatrika ny fotoam-pitsarana androany na ny mpitory na ny toriana. Ny « ministère public » na ny fanjakana no mpanenjika rehefa tonga eo anivon’ny Fampanoavana ny raharaha, amin’ny tranga toy itony, ka na tsy tonga aza ny mpitory dia tsy misakana ny fitsarana tsy handeha fa ny olona toriana no tokony tonga mba hiaro ny tenany, indrindra raha manana mpisolovava izy. Nivoaka ny didim-pitsarana ; 12 volana sazy mihatra amin’i Mahery Lanto Manandafy, narahina famoahana didy fampisamborana azy. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny fiarovana azy dia hanao fanoherana an’ity didy nivoaka ity ny voampanga.
« Mitohy ny fitakiana ny Nosy Malagasy manodidina ary mailo hatrany ny Fitondram-panjakana malagasy sy ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny ». Izany no nambaran’ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Dr Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Oliva raha namaly ny fanontaniana avy amin’ny Solombavambahoaka izy, nandritra ny fihaonan’ny Governemanta tamin’ny Antenimieram-pirenena, ny talata 15 desambra 2020. Tokony ho tanterahina any Frantsa ny fihaonana faharoan’ny “Commission mixte”, izay hanohizana ny fifampiresahana eo amin’ny roa tonta mikasika ireo Nosy ireo, raha natao teto Madagasikara ny fihaonana voalohany tamin’ny 18 novambra 2019. Miandry ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahasalamana any Frantsa, manodidina ny valan’aretina Coronavirus, ny fanatanterahana an’izany dingana faharoa izany.
Nankatoavin’ny teto anivon’ny Antenimierandoholona, androany Alarobia 16 desambra 2020, ny volavolan-dalàna laharana faha 016/2020 tamin’ny 30 oktobra 2020 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana ho amin’ny taona 2021, niaraka tamin’ny fanitsiana natolotry ny teny anivon’ny Antemieram-pirenena, rehefa nandalo fandinihana fanindroany teto anivon’izany Andrimpanjakana izany. Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao fa « hita taratra tamin’ny fandaniana ity lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2021 fa lapan’ny demokrasia tokoa ny eto anivon’ny Antenimierandoholona satria na misy aza ny tsy fitovian-kevitra dia nizotra tamim-pilaminana sy nanaja ny hevitra lanin’ny maro an’isa ny fandaniana izany, ary ny fikatsahana ny tombotsoan’ny firenena no tanjona ».
Tonga nanolotra ny taratasy manendry azy hiasa sy honina eto Madagasikara tamin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny masoivoho vaovaon'i Korea Atsimo, Son Yong-ho, androany 16 desambra 2020. Nandritra ny lanonana izay notanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha no nanambaran'ity ambasadaoro vaovao ity fa « mijoro eo anilan'i Madagasikara hatrany i Korea Atsimo ary hanohy ireo tetikasa efa misy sy hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta ». (Jereo Sary Tohiny)
Mpandraharaha, mpivarotra, mpamboly, mpiompy, mpanao asa tanana... no anisan’ireo sokajin’olona kinendrin’ny hetsika "Anjara hetrako ho fampandrosoana ny tanàna". Midina eny ifotony, araka ny efa nambaran’ny minisitry ny toekarena sy ny vola Randriamandranto Richard, ny mpiasan’ny famorian-ketra araka ny hita teny Ambohimangakely ny tontolo andron’ny talata faha-15 desambra. Hitohy any Ambohimirary, Ambodivoara ary Ambohimalaza, izay samy ao anatin’ny faritra iandraiketan’ny ivon-ketra ao Ambohimangakely ny hetsika mandritra ity herinandro ity. Natao hanamorana ny fahazoana ny karatra fandoavanketra ny hetsika, izay maharitra roa volana any amin’ny faritra sy ny distrika samihafa.
Sary : Antenimierandoholona
Nandray ireo avy ao amin’ny KMF/CNOE sy ny firaisamonim-pirenena ROHY ary ny avy ao amin’ny “Imprimérie nationale” ny Vaomiera misahana ny fanadihadiana eto anivon’ny Antenimierandoholona androany talata 15 desambra 2020. Nandinika manokana ny mahakasika ny fisian’ny « doublons » tamin’ny lisi-pifidianana nandritra ny fifidianana notanterahina teto Madagasikara teo. Nomarihin’ny Loholon’i Madagasikara Rakotovazaha Olivier, fa mialoha ny tena hifaranan’ny fotoam-piasan’izy ireo dia ezahina vitaina ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika ny fanadihadiana atao ka hatolotra ny Filohan’ny Antenimierandoholona sy hampafantarina ny Vahoaka amin’ny alalan’ny gazetim-panjakana ny valiny rehetra, araka ny voalazan’ny lalàna sy ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierandoholona.